Ngwa kachasị mma igbutu egwu ma dezie egwu na android | Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Ngwa gam akporo, Nyocha
Taa ka anyị wetara gị ihe kacha mma Storelọ Ahịa Play metụtara ụda edezi. Ọ bụrụ na ị nwere mmụọ DJ, ọ ga-amasị gị budata egwu di elu, Dochọrọ igbutu egwu, ka ị nwere mmasị ịdekọ onwe gị ịbụ abụ? Anyị na-egosi gị ụfọdụ Ngwa ọdịnala ịchọrọ. E nwere ọtụtụ ohere metụtara ụda edezi. Anyị ga-egosikwa gị ndị nke anyị hụrụ na ọ baara anyị ezigbo uru.
Ever nwetụla mgbe ọ mere gị na akụkụ kachasị amasị gị n’abụ gị dị nso na njedebe?. Mgbe anyị jiri abụ dịka ụdaolu, akụkụ na-amasịkarị anyị anaghị ada ụda. Taa, anyị ga-akwado ngwa iji belata akụkụ nke abụ gị ịchọrọ ụda na ama gị dịka ụdaolu.
1 Ọ dị gị ka DJ? Chọrọ ịme nke gị?
2 Editingda edezi ngwa na ịcha songs na anyị na-amasị ndị kasị
2.1 Mp3 Onye na-egbu ihe na ụdaolu
2.2 Onye na-edekọ ụda na nchịkọta akụkọ
2.3 Onye na-egwu egwu egwu Jam
2.4 Djay 2
3 Gịnị ka i chere nke ndị a ngwa ọdịnala bee songs?
Ọ dị gị ka DJ? Chọrọ ịme nke gị?
Enwere otutu ngwa emere maka iji egwu egwu dika ụdaolu. Idezi na ihe ndị a dị mfe. Naanị anyị ga-ahọrọ otu akụkụ nke egwu iji mee ka ọ daa. Ihe na iji ngwaọrụ kwesịrị ekwesị ga-eme ka ọ dị mfe na ngwa ngwa ịkpụ egwu.
Mana ọ bụrụ n ’ọchịchọ gị dị elu na idezi egwu, echegbula onwe gị. Igwe anyị nwere ike inyere anyị aka idezi egwu na ọkwa kachasị elu. Ọ bụrụ na ịdezi egwu maka gị karịrị naanị ịcha na pasting, anyị ga-egosikwa gị ngwa ọdịnala nke mmasị gị. O doro anya na anyị ga-enyekwara ndị nwere mmụọ ime mmụọ chọrọ iji ụwa a mara onwe ha aka iji ụkpụrụ dị mma.
Editingda edezi ngwa na ịcha songs na anyị na-amasị ndị kasị
Mp3 Onye na-egbu ihe na ụdaolu
Typedị ngwa a na-eme nke ọma na ngwa ngwa Google. N’ụnụ ọkụ n’obi anyị iji hazie ekwentị anyị, anyị chọrọ itinye aka n’onwe anyị na ụdaolu anyị. Ma mgbe anyị gara ịchọ App nke na-arụ ọrụ a na-amasị anyị, ọ na-esiri ike ịhọrọ otu.
Enwere ọtụtụ nhọrọ na echiche dị iche iche na oge ụfọdụ ọ na - ewe oge iji họrọ App kwesịrị ekwesị karịa ịmezi egwu egwu Ihe anyi choro. Maka nke a, anyị chọrọ ime ka nkeji nke ọchụchọ ahụ dị mfe site na ịkọwapụta Ngwa a. Mp3 cutter na Ringtone Maker na-emezu nzube nke anyị ebudatara ya n'ụzọ zuru oke.
Ị chọrọ họrọ akụkụ kachasị amasị gị karịa egwu gị ọkacha mmasị? Na ngwa a ị nwere ike ime ya na obere sekọnd. Họrọ isiokwu kachasị amasị gị ma belata akụkụ ịchọrọ. Nwere ike iji ya ọ bụghị naanị dị ka ụdaolu. Nwekwara ike ịhọrọ mkpu iji teta n'ụra ka mma, ma ọ bụ ụda ọkwa akọwapụtara nke ị na-ege ntị mgbe niile.
Ngwa a na-akwado ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke audio formats ya mere ị gaghị enwe nsogbu ịhọrọ egwu sitere na ama gị. Gini mere anyi jiri were choro ndi ozo? Ọfọn, dị mfe. Ngwa a na-achọ ime ọrụ anyị chọrọ. Bee egwu egwu na-egosi mbido na njedebe. Ozugbo ahọpụtara iberibe ahụ, chekwaa ya dịka anyị chọrọ.
Ngwa dị mfe ma dị irè nke ga - enyere gị aka belata egwu. Ndị rụrụ App a lekwasịrị anya naanị n'otu ọrụ ma nwee ekele maka nke a mgbe ụfọdụ. Clear na kensinammuo interface. Enweghị nsogbu ma ọ bụ ọtụtụ nhọrọ. Ruo n'ókè, họrọ ọkacha mmasị gị isiokwu na-eji ya na-amasị gị dị ka ụdaolu ma ọ bụ ngosi.
Onye MP3 Cutter na Onye Okike
Onye na-edekọ ụda na nchịkọta akụkọ
A na ngwa na-aga a obere n'ihu. More kwupụta professionalization nke music ebipụta. Ọ bụ ngwa zuru oke nke na-enye anyị ohere dị iche iche. Ọ na-anọchi anya ọtụtụ ihe na ihe niile dị mma. Enwere ngwa ole na ole na gam akporo nke na-enye ohere ịgwakọta, ịcha na ịgwakọta.
N'adịghị ka ngwa gara aga, nke anyị tụrụ aro ma ọ bụrụ na ịchọrọ naanị ịhọrọ otu akụkụ. Na Audio Recorder na Editor ị ga-enwe ọtụtụ ohere. Anyị nwere ike tọghata ọdịyo faịlụ dị iche iche formats. Gwakọta odiyo abuo n’otu oge. Ọbụna gbanwee olu nke egwu ndị ahụ na-adabaghị na ndị ọzọ. Anyị nwekwara mmeghari ohuru na igodo.
Ngwa a ọ na-akwado ihe fọrọ nke nta niile formats ugbu a na-eji. Wav, pcm, ife, aac, m4a, na ọtụtụ ndị ọzọ. Gụnyere kwa ị nwere ike iji ya dị ka ihe ndekọ ederede. Faịlụ ị nwere ike mezie dezie na mmasị gị iji nweta ihe achọrọ.
Ndị kere ya kwuru na ọ bụ naanị ihe ndekọ gam akporo nke na-enye gị ohere ịlaghachi mgbe ị na-edekọ. Anyị nwere ike itinye olu anyị na egwu egwu. Gwakọta ha na whim, ọbụna tinye nkuzi mgbamejije ma obu ụda olu di iche.
Na dika, enwere ike idekọ ihe ọ bụla gafere ngwa a ma kesaa ya ozugbo. Enwere ọtụtụ ohere dị iche iche Audio Recorder na Editor na-enye. Ọ bara uru maka ma ọkachamara ma oge ezumike. Mepụta oge nke gị site na ịme ihe mbụ. Ma ọ bụ dee ihe ị na-agaghị echefu n’otu ntabi anya.
Obere snag. Dịka ọ na-adịkarị na ngwa nke ọkwa a, n'oge ụfọdụ, anyị nwere ike tufuo ụfọdụ ụdị mmezi. Nke anyị nwere ike idozi, ee, ịgafe igbe. Anyị nwere mbipute dị mma nke zuru ezu karịa anyị, mana maka ego. Họrọ ebe ị chọrọ ịga.
Onye na-egwu egwu egwu Jam
Ngwa a anyị na-agwa gị na ị ga-enwe ike palitere gị okike. Ọ bụrụ n’inwere onye egwu n’ime, Onye kere egwu Jam ga - enyere gị aka ịpụ ebe ahụ. Na ụzọ dị mfe ị ga-edetu egwu izizi n'oge adịghị anya. Họrọ ụdị egwu gị, ma gaa n'ihu, ohere dị ukwuu. Ihe karịrị ụdị 100 nke egwu na mkpịsị aka gị, Kedu nke gị?.
Rock, Hip Hop, Techno, na Music Maker Jam enwere ebe maka ụdị ndị egwu niile. Anyị ga-enwe igwekota na usoro kachasị dị ọcha nke ụlọ ndekọ. Ihe igwe egwu abuo nke iji meputa egwu na udiri nke gi. Nwere ike ịgụnye olu dị iche iche, ma mee mgbanwe dị oke mfe.
Ọtụtụ mgbe ụdị ngwa a na-emenye ndị na-enweghị ihe ọmụma na nhazi ederede egwu. Ma ọ bụrụ na a na-etu ọnụ ihe, ọ bụ ya mfe njikwa. Adịghị mkpa ịma ihe ọ bụla na mbụ, ị ga-amụta ka i si eji ya. Na ị nwere ike ịkekọrịta ihe okike gị na obodo ndị egwu egwu zuru ụwa ọnụ.
Ndepụta nke mmetụta na loops na Music Maker Jam na-enye anyị nọ n'ọkwa ọkachamara. O nwekwara kwa izu nke ahụ ga-eme gị obi ụtọ kachasị ọhụrụ. Yabụ ngwa a agaghị apụ n'ụdị, ma egwu gị agaghịkwa apụ. Họrọ tempo, nsonaazụ ụda ma nwee ọmarịcha ihe okike gị nwere iji smartpone gị.
Nsonaazụ nke ngwa a na-enye dị ịtụnanya n'ezie. Ngwa ahụ n'onwe ya na-enyere gị aka na mgbanwe ndị ị na-eme na-achikota na ụda olu, olu na oge. Onye na-egwu egwu Jam bụ gị obere ndekọ studio. Egwu gị, ụdị gị, yana ama gị. Kedu ihe ị na-eche iji wepụta onwe gị gaa kpakpando? Site na App a ị ga-abịarukwu ndị na-ege gị ntị nso.
Onye na-eme egwu JAM: ngwa Beatmaker
N'ikpeazụ, ka anyị wee nwee ntakịrị ihe niile, ngwa ka dj na ama anyi. Dị ka ndị niile gara aga, anyị nwere ọtụtụ dịgasị iche iche na Storelọ Ahịa Play. Anyị chọrọ ịgwa gị banyere nke a maka ọtụtụ ihe.
Otu n'ime adịghị ike anyị nwere ike ịchọta mgbe anyị chọrọ DJ na ama anyị bụ ndepụta nke egwu dị. Dị ka iwu zuru oke, anyị ga-edozi maka egwu anyị ibudatara. Na n'ezie, o siri ike ịkụ ndị enyi niile n'anya.
Na djay2 nsogbu ahụ ga-agbada na akụkọ ntolite. Otu n'ime ihe ndị kasị ihe ịga nke ọma atụmatụ maka a App bụ mfe mmekọrịta na Spotify. Ihe na ga - eme ka aha egwu gi ghara inwe oke. The mwekota nke Spotify na a ngwa na-eme ka ọ kasị ike nke Play Store na usoro nke ọdịnaya.
Djay 2 bụ App nke dịkarịrị nso na ọkachamara ọkachamara igwekota. E wezụga ike jikọọ ma mekọrịta ngwaọrụ site na Bluetooth n'out oge. Ọzọkwa nwere nkwado MIDI iji soro ezigbo njikwa dj.
Ọzọkwa pụta ìhè site na ndị ọrụ bụ ọkwa dị elu nke nhazi ihuenyo. Inwe ike ime njikọta nke agba na nha ka amasị anyị. Djay2 na-enye anyị ohere ịme egwu anyị dị ndụ, na-eme nlele nke egwu na-esote iji jikọta ha n'ụzọ kachasị mma. Ma ọ na-enyekwa anyị ohere ịme ndekọ nke oge anyị iji kesaa ha na ndị enyi ma ọ bụ na netwọkụ mmekọrịta.
Na nkenke, djay2 bụ ezigbo ngwaọrụ iji bụrụ onye nwe ọgbakọ gị. Inwe njikọ ịntanetị iji jikọọ na Spotify oge dj gị enweghị oke. Ọ bụrụ nrara onwe gị nye ọrụ gị na DJing, App a bụ ezigbo ngwaọrụ iji mezue oge gị na ekwentị gị. Ma ọ bụrụ na ị bụ naanị onye na-amu amu dj ị nwere ike ịnweta ahụmịhe nke ịbụ "na oche" ma zụlite ụdị egwu gị na-enweghị ogige.
Ahịa: € 2.99
Gịnị ka i chere nke ndị a ngwa ọdịnala bee songs?
Anyị nwere ntakịrị ihe niile dị n'ọhịa egwu na ndezi ederede. Site na ngwa ndị a ị nwere ike itinye na ekwentị gị abụ kacha amasị gị dịka ụdaolu. Cutchacha akụkụ kachasị amasị gị ma jiri ya maka mkpu ma ọ bụ ọkwa. Ọzọkwa ị nwere ike idekọ na dezie audios na music na uche.
Ma n'ezie, kwa ị nwere ike igosi ụwa ndị omenkà ị nwere n'ime. Anyị na-agwa gị ụzọ kachasị mfe iji mepụta egwu nke gị. Ma ọ bụ site na mee ka nnọkọ ahaziri iche nke gị na isiokwu kachasị mma nke oge a. Na nkenke, site na ngwa ndị a chọrọ ụwa nke ọdịyo na edezi egwu dị na aka gị.
Dị ka oge niile, anyị na-akpọ gị òkù ịgụnye ngwa ndị yiri ka ọ kachasị gị mkpa. Ma ọ bụ na ị na-aza ajụjụ banyere ahụmịhe gị na ụfọdụ n'ime ngwa ndị a. Ma ọ bụ ndị ọzọ ị na-eji na ekwentị gị. Anyị na-atụ anya na nhọrọ a masịrị gị nakwa na ngwa ndị a na-enyere gị aka ịmepụta ihe okike gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kacha mma maka egwu na ndezi ederede
Ihe nlele Snapchat, ihe mbu weputara na netwọkụ mmekọrịta
Free ahaziri Christmas ekele video, mee Santa Claus ikele onye ị chọrọ